नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ ३० बिहीबार | Thursday, June 13, 2019 २२:११:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले ९ दिने युरोप भ्रमणमा छन्। युरोप भम्रणकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लन्डनस्थित बिबिसी सेवाको कार्यालयमा अन्तर्वाता दिए। अन्तर्वाताको क्रममा प्रस्तोताले विश्वकै सर्वोच्च शिखर ‘सगरमाथा’ आरोहणको विषयमा प्रश्न गरेको थिए।
प्रस्तोताको सबैभन्दा बढी प्रश्न पनि सगरमाथा आरोहणको विषयमा नै थियो।
प्रस्तोताले सुरुमै 'यसपालि बसन्तकालीन सिजनमा सगरमाथा चढ्न धेरै अनुमतिपत्र वितरण गर्नु गल्ती भएको हो?' भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
प्रस्तोताको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको 'हलुका' जवाफ दिए- यो सत्य होइन।
तर, उनले कतिलाई अनुमति दिएको र यसअघिको सिजनमा कतिलाई दिएको विवरण पेस गर्न सकेनन्। विवरण पेस गर्न नसकेका ओलीलाई प्रस्तोताले नै विवरण सुनाइदिए। यसपटक त ३ सय ८१ लाई अनुमति दिइयो रे नि त? तर, यसअघिका सिजन २०१७ मा ३ सय ६६ लागि मात्रै अनुमति दिएइको थियो। प्रस्तोताको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो संख्या ठूलो संख्या नभएको जिकिर गरे।
त्यसपछि फेरि प्रस्तोताले हिमाल आरोहणमा जानेसँगै शेर्पा गाइडको संख्या जोडेर 'सगरमाथामा जाम हुँदा आरोहीले ज्यान गुमाउनु परो नि?' भनेर प्रश्न गरे। प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले 'पुनर्विचार आवश्यक छ' भने तर अघिजस्तो हल्का शब्द प्रयोग नगरी यसपाली प्रोपोगान्डा भने।
योसँगै फेरि प्रस्तोताले सम्पर्क अधिकृतको विषय उठान गर्दै सोधे- सम्पर्क अधिकृतहरू, जसले आरोहीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो, त्यहाँ जाँदै गएनन्।'
प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हालिरहेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाई उद्धृत गरियो। सबै सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविर पुगेनन्। उनीहरू नगएकाले त्यहाँ भएका सीमित अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको र उनीहरूले पैसा लिएर घरैमा बसेको कुरा सुनाउँदै प्रश्न सोधियो- के यो कुरा सुनेर तपाईँलाई नराम्रो लागेन? यस प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए, ‘हो, हामीले यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले 'हो' भन्नुको अर्थ सम्पर्क अधिकृतहरूबाट सहयोग भएन। यसरी बिबिसीमा सगरमाथाका विषयमा प्रश्नको सामाना गर्दै उत्तर दिएका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई हिमाल आरोहण नियमन गर्ने निकाय पर्यटन विभागले ३ दिनपछि स्वीकार गरेको छ।
विभागले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी र नेपाली गरी ४४ दलका लागि ३७ टोली खटाइए पनि २२ टोली मात्रै सगरमाथा आधार शिविरमा पुगेको स्वीकार गरेको छ। अन्य १५ टोली भने पुग्न नसेकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुग्न नसकेका कतिपय टोलीका सदस्य आफैं बिरामी परेको र लडेर घाइते भएको विभागले जारी गरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै अध्ययन तथा सुझावका लागि समिति समेत गठन भएको उल्लेख छ।